Terminal-ka: Dib u cabbir sawirrada | Laga soo bilaabo Linux
Iyada oo ay la socoto terminaal: Dib u cabbir sawirrada
Marka xigta, xalal kala duwan oo loogu talagalay dhibaatooyinka kala duwan ee maalin walba nala soo bandhigo iyo waqtigan, waxay ina barayaan sida loo qiyaaso sawirada iyada oo loo marayo terminaalka iyadoo la adeegsanayo laba qalab oo ka tirsan xirmada ImageMagick.
Sida ay noogu sheegayaan maqaalka asalka ah:
Marka ugu horeysa, labaduba waxay leeyihiin egyihiin, in kastoo maandhow badalaa sawirka isagoo badalaya feylkii asalka ahaa halka badalashada ku keydi natiijada feyl cusub. KU maandhow kaliya sawirka la badalayo waxaa loo gudbiyaa dood ahaan, halka badalashada, sawirka aan dooneyno inaan badalno iyo magaca feylka meesha natiijada lagu keydin doono.
1.0.1 Sawir kala bar u dhig oo natiijada ku kaydi faylka faylkaaga .jpg:
1.0.2 Cabir u yeelo feylka sawirka.jpg illaa 400 × 300 oo keydso natiijada feylka feylka .jpg:
1.0.3 Kala badh sawirada oo dhan kuna keydi natiijada faylasha kale:
2.0.1 Iska yaree faylka sawirka.jpg kala badh:
2.0.2 Cabbir u yeelo feylka sawirka.jpg illaa 400 × 300:
2.0.3 Kalabar dhammaan sawirrada:
Aynu marka hore aragno sida loo sameeyo hawlo kala duwan badalashada:
Sawir nus ka jar oo keydi natiijada si aad u xajiso faylka2.jpg:
$ convert -resize 50% file.jpg file2.jpg
Cabir u yeelo feylka sawirka.jpg illaa 400 × 300 oo keydso natiijada feylka feylka .jpg:
$ convert -resize 400×300 file.jpg file2.jpg
Kala badh sawirada oo dhan kuna keydi natiijada faylasha kale:
$ convert -resize 50% *
Iska yaree faylka sawirka.jpg kala badh:
mogrify -resize 50% file.jpg
Cabbir u yeelo feylka sawirka.jpg illaa 400 × 300:
mogrify -resize 400×300 file.jpg
Kalabar dhammaan sawirrada:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Iyada oo ay la socoto terminaal: Dib u cabbir sawirrada
Waa wax aad u wanaagsan, laakiin dhibaatada waxaas oo dhan waa in ficil ahaan aan macquul aheyn in la xasuusto dhammaan amarrada codsiyada badan ee konsol, ugu dambeyntiina waxaad haysataa laba ama saddex codsi oo keliya.
Taasi waa waxa u gudubta inuu noqdo nin ciil qaba, Alzheimers ayaa ku soo socda
hahaha, waxay umuuqataa mid taban laakiin tan iyo "da'da cusub" waa sax !!
Waxaa laga yaabaa :), ugu yaraan inaan iska iloobo shikada ah in dunidan ay tahay xd
Uff, emo kale ... LOL !!
Anigu ma ihi emo, llama macquul ah, Waxa kaliya ee ugu fiican nolosha waa cunista, cabitaanka, ciyaarida ciyaaraha fiidiyowga iyo fucking LOL (haddii ay la joogi karto gabar Jaban ah oo ka fiican LOL).
Taasi waa waxa aan isku dayayo inaan u sharaxo Sandy, aduunku waa xaaraan hada, waxaa jira kaliya dad xun oo kugu dhaca agagaarka geeska, shaqo ma jirto, qof walba wuxuu ka qeyb qaataa madadaalo, iwm.
Laakiin xitaa haddii aan tan ku dhahno Sandy, wuu sii wadi doonaa inuu noogu yeero emos, xitaa haddii aanan birta timaha u jareynin, ha is jarin hana dhagaysan My Chemical Romance
MAXAA DHACAYA HADDII AY CAALAMKU KHILAAFO OO AAN DARYEELIN AMARADA! hehehe waan dhididaa hehehe
Taasi waa waxa ficillada caadada ah ee Thunar loogu talagalay! 😀
"Ficil ahaan waa wax aan macquul aheyn in laxasuusto dhamaan amarrada codsiyada badan konsol"
Ma ahan wax aan macquul aheyn, haddii aadan rabin inaad la dagaallanto waxaad marwalba ka sameysan kartaa dhowr magac oo ah .bashrc-kaaga. Ama qoraal bash ah oo hawsha fududeynaya.
Naanaystayaashu ha noolaadaan, waxay nolosha ka dhigaan wax badan oo fudud. In kasta oo taydu ay aad u daran tahay, haddana waxaan sameeyaa magacyo ku habboon-hel ee
Faahfaahin muhiim ah ayaa ah in haddii mid ka mid ah uu aasaaso saamiga laba jibbaaran, badalashada wuxuu hayaa saamiga saxda ah, laakiin wuxuu siinayaa dhinaca dheer cabbirka aan u dejinnay. Waxaan sidoo kale dejin karnaa heerka tayada, waxyaabo badan oo kalena waa la qaban karaa.
convert -resize 1024x1024 -quality 85 miarchivo1.jpg miarchivo2.jpg
Aad u fiican, mar baan soo arkay laakiin mar hore ayaan illaaway. 🙂
Waxaa laga heli karaa Qorfe 1.3
Firefox iyo Thunderbird 10.0.2 ayaa la heli karaa